Fandefasana amponga ao amin'ny poketra Manatee dia vita - Ellicott Dredges
Etazonia: Fameno ny fantsom-bolan'ny Piedroba (PMC) dia mameno ny fandatsahan-jaza amin'ny entona Manatee
Janoary 1, 2011
Ny mpikatroka an-tsokosoko any Florida sy ny mpifaninana an-dranomasina Piedroba Marine Construction (PMC) dia nanambara androany ny fahombiazan'ny ampahany amin'ny Manatee Pocket Dredging Project. Ny PMC dia nalain'i Dickerson avy any Florida tamin'ny fiandohan'ity taona ity mba hanadinadinana ireo tributaries maromaro manodidina ny fantsona lehibe. Ny marika PMC's 2009 8 ″ Ellicott® mitsingeva tohatra mitaingina nampiasa lakandran-dredge ho tery tahaka ny 20 metatra ny sakany. Nafindra tamin'ny alàlan'ny gara booster roa amin'ny halaviran-tongotra 14,000 metatra ny fitaovana dredged.
Ny CEO sy talen'ny PMC, Dr. Prieto-Portar dia tena faly tamin'ny fahombiazan'ny asa ary nidera ny fiaraha-miasan'ny ekipa roa tonta: "Tena nahafaly ny niara-niasa tamin'i Dickerson avy any Florida, mpiantoka sy matihanina, tamin'ny asa sarotra toa ny ny Tetikasa Manatee Pocket Dredging. Ny ekipanay, notarihan'ny mpitantana Wayne Riley, dia nanao asa tena tsara niatrika ireo fanamby natolotry ny tetikasa. ” Ny filohan'ny Dickerson an'ny Florida, Larry Dale dia nidera ny PMC tamin'ny zava-bitany miavaka: "Ny ekipanay dia mankasitraka ny fahaiza-manaon'ny tetik'asa PMC sy ny fahaizany ary ny hafanam-po nasehon'ireo mpiasan'ny sahaninao. Ny PMC dia sady mamokatra no mandany vola ary manantena ny mbola hiara-miasa izahay ».
Nanampy toy izao i Luis Prieto y Munoz, filohan'ny PMC: “Manatee Pocket dia iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mpanao sambo lehibe indrindra any Etazonia. Andro vitsy lasa izay, dia nanao fitrandrahana rano teo alohan'ny Sekolin'i Chapman Seamanship izahay. Mahafaly ny mahita ny olona mankafy tanteraka ny vokatry ny asanay ”.
Momba ny fananganana an-dranomasina Piedroba:
Piedroba Marine Construction (PMC) dia orinasa kely manamarina ny tenany sy ny orinasa mpiantoka ny ranomasina izay miorina ao South Florida. PMC dia manolotra serivisy fananganana kompania sy fanamboarana ara-tontolo iainana ao anatin'izany ny fanamboarana an-dranomasina, ary ny fanodinana manerana an'i Etazonia atsimo.
Navoaka tamin'ny Dredging androany
Atombohy amin'ny tetikasan'ny Ellicott ny tetikasan'ny famoahana rano anao